निर्मला हत्या प्रकरण, दोस्रो दिन पनि कञ्चनपुर तनावग्रस्त - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
निर्मला हत्या प्रकरण, दोस्रो दिन पनि कञ्चनपुर तनावग्रस्त
प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०७५, बुधबार August 22, 2018
धनगढी । १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरीले नक्कली अभियुक्त सार्वजनिक गरेको भन्दै कञ्चनपुरमा बुधबार दोस्रो दिन पनि बिहानैदेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । बिरोध प्रदर्शनकाक्रममा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ ।
प्रहरीले मानसिक सन्तुलत बिग्रेका दिलिपसिंह विष्टले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्दै सोमबार उनलाई सार्वजनिक गरेको थियो । तर पीडितका आफन्त र स्थानीय बासिन्दाले भने वास्तविक हत्यारालाई प्रहरीले जोगाउन खोजेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
बुधबार पनि बिहानैदेखि महेन्द्रनगर बजारमा प्रदर्शन भएको हो । ठूलो संख्यामा जम्मा भएका आफन्त, स्थानीय बासिन्दा, विद्यार्थीले प्रहरीलाई वास्तविक हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले बलत्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरुले मंगलबार दिनभर पनि महेन्द्रनगर बजारमा प्रदर्शन गरेका थिए । सो क्रममा स्थिती नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर र अश्रु ग्याँस प्रहार गरेको थियो । आन्दालनकारीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हवाई फायर गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सरुवाको मागसमेत गरेका छन् ।
मलेसियामा श्रमिकको तलव बढ्दै, लाखौँ नेपाली कामदार लाभान्वित
काठमाडौं । नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियामा स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिकहरुको […]
डिभी भर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? फेरियो नियम,पासपोर्ट अनिवार्य,यस्तो अमेरिकी सरकारको निर्देशिका
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षका लागि अक्टोबर २ देखि डिभी लोटरी खुल्ने भएको छ । अमेरिकी सरकारको विदेश […]
अष्ट्रेलियामा अनलाइन तीज नृत्य प्रतियोगिता, यसरी हुनुहोस् सहभागी
विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ : ‘कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी खोप कहिले पत्ता नलाग्न पनि सक्छ !
नेपालमा उपचाररत रहेका कोरोना संक्रमितमध्ये ३६ जनाको अवस्था गम्भीर कुन प्रदेशमा कति ? (सूचीसहित)
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १ करोड ८४ लाख ३४ हजार नाघ्यो
जीवनमा आफ्नै भोगाईबाट सिकेका कुरा बढी उपयोगी